Arday jaceyl uu u qaaday haweeney xildhibaanad ah ku muteystay XABSI - Caasimada Online
Home Dunida Arday jaceyl uu u qaaday haweeney xildhibaanad ah ku muteystay XABSI
Arday jaceyl uu u qaaday haweeney xildhibaanad ah ku muteystay XABSI
Kampala (Caasimada Online) – Dowlada Uganda ayaa xabsi dhigtay arday la sheegay inuu Jaceyl u qaaday haweeney ka tirsan Xubnaha Barlamaanka dalkaasi.
Ardaygan oo lagu magacaabo Brian Isiko ayaa lagu xukumay xabsi laba sano ah, waxa uuna maxkamada ka hor qirtay in jaceylka uu u qaaday haweeneydaas uu sababay in interneedka uu u mariyo hanjabaad ka dhalatay Jaceylka.
Qoraalka hanjabaada oo lahorgeeyay Maxkamada ayaa waxaa ka muuqday erayo adag oo lagu soo celcelshay kuwaa oo qalqal amni galiyay haweeneyda laga soo doortay degmada kabalore Sylvia kwabwoogo.
Waxa ay iyana haweeneydan maxkamada ka hor sheegtay in ay markii hore qiyaali la aheyd sheegashada ah in wiilkasi uu u qabo jaceyl, hase yeeshee markii danbe ay rumeysatay kadib markii ay kala kulantay hanjabaad xunbaarsan jaceyl.
Sidoo kale, waxa ay maxkamada ka hor cadeysay in ay seexan weyday markii ay aragtay fariin ah in uu u dhimanayo jaceylka uu u qaaday hadii ay diidana uu dili doono.
Kiiskan jaceylka iyo hanjabaada u dhexeeya ayaa dalka Ugandha ka noqday mid hadal heyntiisu badan tahay, waana kiis ay ku wareertay maxkamada.
Dhinaca kale, Maxkamada oo xadgudub siyaasi u aragta kiiska ayaa xukun laba sano ah ku riday ardaygan lagu magacaabo.